Fironana kanto 5 izay fironana amin'ny famolavolana ankehitriny | Famoronana an-tserasera
Fironana artista 5 izay mirona amin'ny famolavolana ankehitriny
Raha tsy maintsy niresaka momba ny famolavolana sary izay miseho matetika kokoa ankehitriny isika ary maneho ny saina mpamorona (amin'ny teny ankapobeny) ankehitriny ... Inona no holazainao? Inona avy ireo onja kanto fantatrao fa mahazatra, miverimberina ary mahomby amin'ny sehatra kanto ankehitriny?
Avy eo dia ho hitantsika ireo hetsika dimy izay maneho tsara indrindra ny mpamorona sary ankehitriny:
Minimalism: Ny fotony dia izay mamaritra ny mombamomba ny singa iray ary ny manome lanja sy ny kalitao azy ka izay rehetra tsy ilaina dia fihemorana, enta-mavesatra, saika sakana. Ny fiheverana ny kely indrindra dia nampiasaina voalohany tamin'ny molotr'i Richard Wollheim, psikology, tamin'ny taona XNUMX. Mazava ny fiantraikan'ny fe-potoam-piasany: Izay zavatra manana votoatin'ny fahalalana avo lenta saingy ambany ny votoatiny ofisialy. Ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka an'io fironana ara-javakanto io dia ny abstraction, ny toekarena, ny mari-pahaizana geometrique ary ny singa mifototra amin'ny fahadiovan'ny rafitra. Ny zava-drehetra dia toa mifantoka amin'ny habaka farany ambany ilaina mba hahafahana mamaritra ny tenany ho zavatra iray. Amin'izao fotoana izao ny fanehoana mazava indrindra ny minimalism amin'ny endrika sary sy tranokala dia ny famolavolana fisaka. Ity hetsika ity dia mizara amin'ny lafiny telo, ny antsipiriany ary ny nuansa. Ny zava-drehetra dia hangonina amin'ny fananganana mazava, miaraka amin'ny loko madio ary tsy mampiasa afa-tsy ireo singa fototra ihany.
Retro sy vintage: Ireo onjan-drano roa ireo dia niteraka fotoana taloha ary nivavaka tamin'ny maodely kanto nanjaka tamin'ny andro taloha. Ny niandohan'ilay teny hoe antitra dia avy amin'ny fivoaran'ny teny latinina hoe "vindemia" ary io dia nampiasaina hanondroana ireo divay tranainy sy avo lenta indrindra. Ity teny ity dia nampiova hevitra sy niampita ny fetran'ny lamaody, nahazo dikany vaovao: Ireo singa rehetra amin'ny fanaka, fitafiana na karazana kojakoja rehetra izay farafahakeliny roapolo taona ary manome tombam-bidy amin'ny fotoana namoronana azy ireo, dia ho lasa relika marina. Harena tamin'ny lasa. Fa ny teny hoe Retro dia nifangaro tamin'ny teny hoe antitra, izay na dia manana toetra iraisana marobe aza izy ireo dia samy hafa tokoa ary manondro fironana samihafa. Ny singa taloha dia ireo asa rehetra ireo izay avy tamin'ny lasa nefa tsy nahazo karazana fanovana, farafaharatsiny mba tsy nahitana fanovana lehibe. Ireo dia zavaboary tamin'ny fotoana hafa izay notehirizina ary toy ny divay tsara, nomen'ny fotoana lanja bebe kokoa azy ireo. Ny famoronana Retro na ny famoronana dia zavaboary ankehitriny, tanterahina miaraka amin'ny fomba ankehitriny fa manahaka ireo torolàlana na maodely noforonina tamin'ny andro taloha. Amin'izany fomba izany, ny tolo-kevitra sary rehetra izay amboarintsika ho mpamorona dia tolo-kevitra retro. Ireo onjam-peo ireo dia misy eo amin'ny tontolon'ny photomanipulation sy ny fakana sary tahaka ny amin'ny famolavolana tranonkala, ny fanoratana ary ny fametrahana azy ireo.
Cubism: Io no niandohan'ny avant-gardes tamin'ny taonjato faharoa-polo ary ny marina dia avy tamin'ny fisehoany no nijanonany tsy niteny tamin'ny fomba kely kokoa mba hanambarana amin'ny fomba ofisialy ny fialan-tsasatra amin'ny tsingerin'ny kanto teo aloha. Atao Batemy ho cubism izy noho ny fampiasana cubes tsy tapaka hanehoana na inona na inona asa. Ny fomba fijery marobe no loharanon-karena lehibe amin'ity vanim-potoana kanto vaovao ity. Ny ampahany sy ny tarehin-javatra rehetra dia aseho miaraka, izany hoe izay zavatra fantatra momba azy dia aseho amin'ny fiaramanidina iray ihany. Ity lafiny siantifika sy ara-teknika ity dia tena mahaliana satria miasa miaraka amin'ny kanto amin'ny fomba fijerin'ny andrana tanteraka ary manokatra varavarana ho an'izao rehetra izao mifanitsy sy fahitana zavakanto vaovao. Ary io fahitana io dia mbola manan-kery hatrany amina endrika maro, izany no porofo tsy azo lavina momba ny kalitaony. Na eo aza ny fotoana lasa, ny firaketana sy ny fandraisan'anjaran'izy ireo dia mitohy hatrany ny fironana amin'ny karazana tolo-kevitra rehetra. Afaka mahita ny taolan'ny Picasso, Blanchard, Braque na Gris amin'ny karazana asa rehetra izahay: sary sokitra, sinema, afisy dokam-barotra ...
Fanamarinana: Izy io dia iray amin'ireo vanguard kanto manintona indrindra tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny tarehimarika toa an'i Bosco na Goya dia niandraikitra ny fanamboarana ny lalana hiseho ilay teny hoe tsy azo antoka aorian'izay. Ny teny nalaina avy amin'ny mpampianatra Goya lehibe dia afaka nampiditra izany rehetra izany. "Ny nofinofin'ny antony dia miteraka biby goavambe". Rahoviana anefa isika no mamela ny antony hatoriantsika sy hanonofinofy? Rahoviana isika no mamela ny tenantsika hiala amin'ny lalàna napetraky ny siansa, ny fiaraha-monina ary ny fomban-drazana? Angamba izany fanafahana ateraky ny nofy izany dia ny sakafon'ilay biby goavam-be mpamorona izay ananantsika ao anatiny. Ny lova lehibe indrindra navelan'ireto antecedents rehetra anay ireto dia ny fikomiana tamin'ny zava-misy sy ny lojika. Ny antony dia toa lasa fahavalon'ny olombelona tampoka tamin'ny famerana azy io ary nampihena azy ho amin'ny toe-piainana antonony. Fotoana fohy izao, izay hanjakan'ny fialamboly an-tsaina sy ny maha-zava-dehibe ny nofinofy ny canvases, ny sinema ary ny zavakanto. Ny tsy fahitana nofinofy sy ny tontolon'ny tsy mahay mandanjalanja dia solontenan'ny karazan-tolo-kevitra rehetra, na dia toa mahagaga aza izany. Androany dia miseho mihoatra ny zava-drehetra izy amin'ny photomanipulation, fanoharana ary ireo faritra mamela ny fahalalahana lehibe kokoa ary tsy dia iharan'ny fombafomba sy akademika.
Mpandala hirihiriny: Amin'ny lafiny sasany, azontsika atao ny milaza fa ny hetsiky ny fitetezam-borona dia fifangaroan'ny toetran'ny toetrandro teo aloha. Ny fihetsiketsehana ankehitriny na ny fihenam-bidy no tena solontenan'ny tanora ankehitriny. Tamin'ny voalohany dia nampifandraisina tamin'ny mozika tsy miankina izy io fa matetika kosa dia nifandray tamin'ny sehatry ny zavakanto hafa sy ny tontolon'ny famoronana ity torontoronina ity. Raha miresaka ny tena mampiavaka azy isika, dia misongadina amin'ny maha-eklektika azy ary mampivondrona ampahany tsara amin'ireo singa natolotry ny hetsika postwar hafa toy ny beatnik, hippie, punk ary grunge. Amin'ny famolavolana sary dia aseho amin'ny alàlan'ny singa Retro, minimalism, surrealism ary angamba koa ny cubism, na dia kely aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fironana artista 5 izay mirona amin'ny famolavolana ankehitriny
+20 loharano maimaimpoana momba ny natiora
+ Loharano 20 ho an'ny fetin'ny reny